UDkt Veron Ramsuran uhlonishwe nge-UKZN Vice-Chancellor’s Award wangowezi-2019.
Umcwaningi omkhulu eKolishi Lezifundo Zezempilo nase-KRISP, uDkt Veron Ramsuran, uthi ujabule eklonyeliswa nge-UKZN Vice-Chancellor’s 2019 Award yenani lika-R150 000.
Lo mklomelo waminyaka yonke utholwa abacwaningi abavelele base-UKZN, ukubabonga ngegalelo labo emisebenzini yocwaningo nokuhlonishwa abakutholayo emhlabeni wonke.
UMphathi weNyuvesi, uSolwazi Nana Poku, uhalalisele uRamsuran, wathi: ‘Yemukela izilokotho zami zokukuhalalisela ngalo mklomelo omkhulu. Ngikufisela inhlanhla futhi ngethemba ukuthi uzokusiza emisebenzini yocwaningo osazoyenza.’
U-Ramsuran, owathola iziqu zobudokotela e-UKZN, ugxile ekucwaningeni ngezinto eziningi ezithinta igciwane lesandulelangculazi, wenza umsebenzi wakhe omningi emagunjini okuhlola aseMelika i-Fred Hutchinson Cancer Research Center yaseSeattle, e-Washington, ne-University of Texas Health Science Center e-San Antonio, e-Texas.
Ngokuhamba kwesikhathi wathola iziqu zobudokotela egxile ekucwaningeni e-Ragon Institute of MGH, MIT nase-Harvard ngaphambi kokuthi abuyele eNingizimu Afrika azofundisa e-UKZN. Wenza izinto eziningi kumanje, okubalwa kuzona ukuba i-Group Leader e-KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (e-KRISP), i-UK Royal Society Future Leader African Independent Research (e-FLAIR) Fellow; i-Associate Scientist e-Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (eCAPRISA), nokuba umcwaningi ovakashile e-National Cancer Institute e-NIH.
Useke wahlonishwa ngemiklomelo eminingi nezindondo, waba ngumhleli wamabhuku ocwaningo ahlonishwayo ekwelashweni kwamagciwane.
Umsebenzi wakhe ugxile ekubhekeni izindawo ezihlala igciwane lesandulelangculazi nesifo sofuba nolibofuzo lwama-Human Leukocyte Antigen.
U-Ramsuran usanda kuthola umklomelo i-Future Leader of African Independent Research (i-FLAIR) Collaboration, ayithola ngokuhlanganyela nososayensi wase-UKZN nase-Oxford University eNgilandi uSolwazi Philip Goulder. Umklomelo i-UK Royal Society izoxhasa ucwaningo lwabo olubheka ukuthi kungani izingane zamantombazane zisengozini yokuthola igciwane lesandulelangculazi ngokuphindwe kabili kuya kokuthathu. Abacwaningi bakholwa ukuthi imbangela yaloku ukuthi kukhona okuvikela izingane zabafana, nokuyikona kanye abazokucwaninga.